iPhone 5G: Apple waa inuu ugu dambeyntii sugaa 2021 - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM IPhone 5G: Apple waa inuu ugu dambeyntii sugaa 2021
Inkastoo Samsung ay soo saartay smartphone-ka ugu horeysay ee 5G, haddana shirkadda Apple waa inay sugto 2021. Ciladda Intel ee ku dhibtooneysa inuu dhameeyo modemka 5G.
Toddobaadkan waxaa la dhigay calaamadda 5G ee suuqa suuqyada. South Korea ayaa noqday Arbacadii oo ah dalka ugu horeeya dunida oo dhan si ay u bixiyaan jiilka shanaad ee heerarka shabakadaha mobile dhulka oo dhan. In ka yar afartan iyo siddeed saacadood ka dib, wershada lambarka ganacsiga ee Samsung, ayaa calaamad u ah wararka iyada oo suuq geyneysa Galaxy S10 5Gtignoolajka kowaad wuxuu ku habboon yahay tiknoolajigan
Dhanka kale, Apple ayaa la dhibtooneysa dulqaad iyo in laga yaabo inay bilowdo daahitaan. Waxaa la filayaa bisha September 2020iPhone ugu horeysay ee 5G-ku xiran waxaa ugu dambeyntii lagu sii deyn karaa 2021. Dacwad oogista sharciga ah ee ka dhanka ah Qualcomm, shirkadda Cupertino ayaa go'aansatay in ay u jeestaan ​​Intel si ay u siiso qalabka 5G. Labada shirkadood ayaa horeyba u shaqeynayeen, shirkadda qalabka jaban waxay soo saartey moodhadhka loogu talagalay iPhone 7 ka hor intaanan noqon adeegga alaab-gacmeed oo keliya oo Apple ah iPhone XsXs Max et Xr. Si gaar ah ula qabashada shirkadda ka dambeysa iPhone ayaa badanaa loo arkaa inay yihiin war wanaagsan, laakiin waxay noqon kartaa hadiyado sumaysan oo Intel ah. The weyn Santa Clara waxay ahayd in ay sii wadaan bixiyaha gaarka ah ee modemada 5G ee iPhone 2020, wuxuu xusay goobta Shirkadda Fastlaakiin waa uu soo daahay. Qaar ka mid ah indiscritsions report in Intel ayaa ku dhibtooneysa in ay dhameeyaan XMM 8160 5G modem.
Si aad u diyaargarowdo soo iibinta iPhone 5G mustaqbalka, Intel waa inuu shaybaarka u keenaa Apple bilowga xagaaga, ka dibna qaybta kama dambaysta ah ee modemkeeda bilowga sanadka 2020. Si kastaba ha ahaatee, shirkadda uu hoggaamiyo Tim Cook, waxay shaki gelin kartaa awoodda uu lamaanuhu u leeyahay inuu jaangooyo jadwalka oo uu raadiyo xal badbaado. Apple wuxuu injineeriyeyaasha ku xardhay Qualcomm iyo Intel si ay u dhistaan ​​koox ka tirsan injineerada 1000 1200 oo ka shaqeeya jajabyada iyo modemada "guriga." Dambe wuxuu noqon lahaa iPhone ee mustaqbalka, laakiin horumarku wuxuu qaadanayaa waqti waxaana shirkadda Californian dalbanaysa laga tagay iyada oo aan xal la helin.
Intel waa uu ku kalsoon yahay, Qualcomm waa diyaar
Warshadaha kale ayaa jira oo Apple ayaa ka gaabsatay inay ka wada hadashaan Samsung iyo MediaTek si ay xal ugu helaan muddada gaaban. Waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa doonaya inuu iibiyo modem 5G iyo xiriirka uu la leeyahay saaxiibka ugu weyn waxay raadinayaan wanaaglaakiin ma uusan dooneynin inuu yimaado islamarkaana uu caawiyo kooxdiisa ugu awooda badan sida waqti gaaban. Marka laga eego MediaTek, waa qorshe C. Qorshaha Taiwanese ma awoodi karto inuu buuxiyo shuruudaha Apple-ka. Sida Qualcomm, khilaafka sharci ee ka dhexeeya labada shirkadood waxay sameeyaan iskaashi cusub oo adag. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay noqon kartaa xalka ugu kharashka yar ee Apple iyo Qualcomm la yaab leh adoo sheegaya in ay diyaar u ahayd.
"Wali waxaan joognaa San Diego, waxay haystaan ​​lambarkayaga telefoonka"ayuu yiri madaxweynaha Qualcomm Cristiano Amon goobta Axios (via AppleInsider). "Haddii ay soo wacaan, waan taageeri doonaa". Dhinaceeda, xeryaha Intel ee ku yaala jagooyinkooda waxayna hubinayaan in ay diyaar u tahay inay sameyso modemka 5G wakhtigeeda. Haddii kale, waxaa dhici karta inaysan jirin 5G iPhone ka hor 2021.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://labo.fnac.com/actualite/iphone-5g-apple-pourrait-finalement-attendre-2021/